Inona no ilaiko handehanana any Londres: Pasipaoro sy antontan-taratasy hafa | News Travel
Louis Martinez | 18/04/2022 15:00 | mpitarika, Londres
Inona no ilaiko handehanana any Londres? Ity fanontaniana ity dia lasa mahazatra hatramin'ny United Kingdom nandao ny Vondrona Eoropeana tamin’ny 2021 janoary XNUMX. Satria, hatramin’izay, dia ampy ny nitondranao ny kara-panondro mba hidiranao eto an-tanindrazana, saingy niova izany, ho hitantsika eo.
Amin'ny lafiny iray, London dia mbola iray amin'ireo toerana tena tian'ny mpandeha avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao. Maniry mafy hahita ny Westminster Palace sy Abbey, Lapam-panjakana sy Fortress (ny Tilikambon'i Londres) sy ny tetezany malaza, ilay manaitra Katedralin'i San Pablo na ny Tranombakoka britanika. Saingy te-handeha amin'ny Piccadilly Circus na Trafalgar Square ihany koa izy ireo. Noho izany dia hamaly anao ny fanontaniana izahay inona no ilaiko handehanana any london.
1 Taratasy ilainao handehanana any Londres
2 Antontan-taratasy hafa
2.1 Taratasy momba ny fahasalamana
2.2 Fahazoan-dàlana mitondra fiara
3 Lafiny hafa tokony hodinihina rehefa mandeha any Londres
3.1 Fampiasana telefaona sy data
3.2 vola madinika
3.3 Famindrana any Londres
Taratasy ilainao handehanana any Londres
Ilaina ny pasipaoro raha handeha ho any Londres
Araka ny voalazanay taminao, manomboka ny 2021 Janoary XNUMX dia tsy afaka mandeha any Londres ianao miaraka amin'ny taratasim-pirenena. Ny Royaume-Uni dia tsy an'ny antsoina hoe Faritra Schengen. Izany dia ahitana firenena enina amby roapolo izay nanafoana ny sisin-taniny. Ny Anglisy, tamin'ny nandaozany ny Vondrona Eoropeana, dia nandao an'io fifanarahana io.
Noho izany, mila mandeha any Londres ianao ny pasipaoronao araka ny filaharany. Tadidio koa fa raha miara-dia amin’ny zanakao ianao nefa kely izy ireo, dia mila manao an’io taratasy io ho azy ireo koa ianao, satria hangataka izany izy ireo rehefa tonga.
Amin'ny lafiny iray, raha Espaniola ianao, tsy mila visa ianao isaky ny fotoana fohy ny dianao. Midika izany fa raha mandeha amin'ny fizahan-tany ianao na mitsidika havana iray ary latsaky ny 180 andro ny fijanonanao dia tsy mila izany ianao. Saingy, ho an'ny dia atosiky ny antony hafa na maharitra kokoa, dia mety ilainao izany.
Amin'ny lafiny iray, raha tsy Espaniola ianao dia mety mila an'ity antontan-taratasy ity. Ohatra, raha olom-pirenen'ny firenena Hispanika-Amerikana ianao, dia tsy tafiditra amin'ilay antsoina hoe Eoropeana fifanarahana momba ny Brexit ary azo antoka fa tsy maintsy mahazo ity antontan-taratasy fanampiny ity ianao. Amin'ny lafiny iray, noho ny fifandraisany ara-tantara amin'i Royaume-Uni, ny olom-pirenen'i Royaume-Uni dia tsy mila visa hiditra ao amin'ny firenena. Aostralia, Afrika Atsimo, Nouvelle Zélande, Kanada ary Etazonia.
Na ahoana na ahoana, ho famintinana, dia holazainay aminao fa, raha Espaniola ianao, dia mila ny pasipaoronao handehanana any Londres. Amin'ny lafiny iray, raha manana zom-pirenena hafa ianao na haharitra ny fijanonanao, dia mety mila visa vonjimaika na antontan-taratasy hafa koa ianao. Noho izany antony izany dia manoro hevitra foana izahay jereo amin'ny masoivoho britanika ny antontan-taratasy ilaina hidirana ny firenena.
Io no fomba azo antoka indrindra handehanana any Londres miaraka amin'ny antoka ara-dalàna rehetra. Saingy, raha te hitsidika ny tanàna britanika ianao, dia tokony handinika ireo antontan-taratasy manan-danja hafa amin'ny dianao.
Picadilly Circus, iray amin'ireo mari-pamantarana any Londres
Hatreto dia niresaka momba ny antontan-taratasy ilainao hidirana any Royaume-Uni isika. Saingy, raha te hanana fijanonana mangina sy mahafinaritra ao amin'io firenena io ianao, dia manoro hevitra ihany koa izahay mba handinika lafin-javatra hafa alohan'ny hanombohanao ny dianao any Londres.
Taratasy momba ny fahasalamana
Karatra ara-pahasalamana italiana
Tena zava-dehibe ny milaza aminao fa ny Karatra fidiovana eropeana mbola manankery any UK izy io na eo aza ny fialany amin'ny vondrona Union. Noho izany, ity antontan-taratasy ity dia ahafahanao mahazo fitsaboana raha toa ka marary na tratran'ny loza ianao.
Na izany aza, tianay ny manoro hevitra anao, mifanaraka amin'ny inona ny Minisiteran'ny Raharaham-bahiny Espaina, manao ny tenanao a fiantohana ara-pitsaboana tsy miankina alohan'ny handehanana. Misy fitsaboana sasany izay tsy tafiditra ao amin'ny rafi-pahasalamam-bahoaka britanika. Noho izany, raha mila azy ireo ianao, dia tsy maintsy mandoa azy ireo avy any am-paosy.
Amin'ny lafiny iray, raha mandeha miaraka amin'ny fiantohana ara-pahasalamana tsy miankina tsara ianao, dia hanana fandrakofana ara-toekarena amin'ny politikanao hiatrehana ireo fandoavam-bola ireo. Amin’izany fomba izany, dia tsy hanahy momba ny vola ianao, mba ho sitrana amin’ny aretinao.
Fahazoan-dàlana mitondra fiara
Fiara fitateram-bahoaka mahazatra any Londres
Tsy dia manan-danja loatra noho ireo antontan-taratasy teo aloha ny mifandraika amin'ny fiara. Satria London dia manana tambazotra fitateram-bahoaka tena tsara ary tsy mila manofa fiara ianao. Ankoatra izany, tsy manoro azy izahay noho ny antony maro.
Voalohany indrindra, tadidio fa any UK ianao dia mandeha amin'ny ankavia ary ny fiara britanika dia mandeha amin'ny tanana havanana. Noho izany, raha tsy zatra izany ianao, dia ho sarotra aminao ny mitondra fiara eny amin'ny arabe sy ny arabe. Ary koa, be dia be sy sarotra ny fifamoivoizana any Londres, toy ny any amin'ny tanàna lehibe rehetra, indrindra raha tsy fantatrao tsara ny arabe.
Marina fa afaka mandeha any amin'ny renivohitra britanika ianao miaraka amin'ny fiaranao manokana. Noho izany, hialana amin'ny olana amin'ny familiana ianao, fa tsy ny hafa izay nasehonay anao. Na izany na tsy izany, afaka mitondra fiara na aiza na aiza any UK miaraka amin'ny fahazoan-dàlana vahiny nandritra ny taona voalohany nipetrahanao teto an-tanindrazana. Tsy maintsy entinao miaraka aminao izany isaky ny maka ny fiara ianao ary koa, raha fiaranao manokana izany, ny karatry ny fiantohana iraisam-pirenena hanampy anao amin'ny lozam-pifamoivoizana. Toy izany koa, ny antontan-taratasy hafa rehetra momba ny fiara dia tsy maintsy milamina.
Lafiny hafa tokony hodinihina rehefa mandeha any Londres
Mpizaha tany amin'ny seranam-piaramanidina
Toy ny tamin'ireo antontan-taratasy teo aloha, dia ilaina ihany koa, alohan'ny handehananao, mandamina lafin-javatra sasany izay misy ifandraisany amin'ny fitaovana finday, vola ary ny fomba mifindra manodidina ny tanàna na mitsidika ny tsangambato. Hiresaka aminareo momba izany rehetra izany izahay.
Fampiasana telefaona sy data
Mandritra ny fijanonanao any UK dia hampiasa ny findainao sy ny fitaovana elektronika hafa ianao. Saingy, raha tsy te handoa vola be ho azy ianao, dia zava-dehibe izany mampahafantatra anao ny fampiasana angon-drakitra omen'ny orinasanao teknolojia anao. dia ny fantatra miriaria.
Betsaka ny orinasam-pifandraisan-davitra efa manolotra miriaria Maimaim-poana manerana ny Vondrona Eoropeana. Na izany aza, tsy maintsy tsaroanao fa tsy azy intsony ny Royaume-Uni. Noho izany, mety tsy maintsy mandoa misaraka ianao amin'ny angonao. Ny tsara indrindra dia ny mampandre ny mpamatsy anao mba tsy hahazoanao tsy ampoizina tsy mahafinaritra amin'ny volavolan-dalàna.
Amin'ny lafiny iray, ilaina ny mandinika ny olana momba ny vola. Koa satria tsy anisan'ny Vondrona Eoropeana intsony ny firenena Britanika, dia tsy vola ara-dalàna intsony ny euro. Marina fa mbola manaiky izany hatrany ireo toerana fizahan-tany goavana sy ireo hotely lehibe. Fa alaivo sary an-tsaina hoe te hividy lobaka na hisotro labiera ianao. Ireo orinasa madinika ireo dia tsy voatery hanaiky ny volam-piarahamonina ary mety hangataka anao handoa azy ireo sterling.
Marina koa fa azonao atao ny manakalo euros amin'ny vola britanika any amin'ny banky na trano fifanakalozana any Londres. Na izany aza, manoro hevitra anao izahay mba hanao izany alohan'ny handehananao. Ny antony dia ny komisiona ho an'ny fifanakalozam-bola any Royaume-Uni dia mety ho avo kokoa noho ny any Espaina izy ireo.
Safidy iray hafa dia ny mandoa vola amin'ny carte de crédit. Fa ny bankinao koa dia handoa anao amin'izany. Miankina amin'ny banky tsirairay izany, fa matetika dia isan-jaton'ny vola naloanao izany ary manodidina ny iray isan-jato.
Famindrana any Londres
Ny Tower Bridge any Londres
Efa nanakivy anao izahay tsy hampiasa ny fiara any amin'ny tanàna britanika. Nolazainay ihany koa fa manana tambazotra fitateram-bahoaka tena tsara izy io. Fa, ho fanampin'izany, toy ny mitranga amin'ny tanàna fizahan-tany hafa, dia manolotra anao ny fahafahana hividy hafa fomba amam-panao karatra mampiasa bus, metro ary lalamby.
Tianay asongadina amin'io lafiny io ny Karatra fitsangatsanganana. Amin'ny ankapobeny, mamela anao hampiasa fitateram-bahoaka mandritra ny fotoana voafetra. Afaka mividy izany mandritra ny iray andro na fito. Ankoatra izany, ny voalohany dia manolotra anao hisafidy na ny fampiasana azy amin'ny ora maika (alohan'ny sivy ora sy sasany maraina) na any ivelany.
Hahita izany ianao any amin'ny toerana fampahafantarana mpizahatany rehetra, ao amin'ny metro na gara ary eny amin'ny masoivohom-baovao maro. Fanampin'izay, ahafahan'ny ankizy efatra latsaky ny folo taona hiara-mandeha aminao maimaimpoana.
Ny vidiny dia miankina amin'ny faritra an-tanàn-dehibe izay ahafahanao mandehandeha. Fa ny tena fototra ho an'ny iray andro dia manodidina ny dimy ambin'ny folo euros, raha fito kosa dia manodidina ny efapolo. Na izany aza, misy fihenam-bidy ho an'ny zazalahy eo anelanelan'ny iraika ambin'ny folo sy dimy ambin'ny folo taona izay mitentina eo amin'ny roapolo euros mandritra ny fito andro.
Safidy hafa dia ny karatra oyster, izay ahafahanao mivezivezy tsy misy fetra. Saingy misy ny tsy fahatomombanana izay tsy maintsy averinao matetika.
Farany, holazainay aminao ny momba ny karatra iray hafa izay tena ilaina any Londres. Momba ny Pass London, izay ahafahanao miditra amin'ny toerana mahaliana maro, ary koa fihenam-bidy mahaliana hafa. Azonao atao ny mividy izany amin'ny andro iray manan-kery hatramin'ny enina ary ny vidiny dia manomboka amin'ny 75 ka hatramin'ny 160 euros.
Anisan'ireo marika london izay azonao tsidihina miaraka aminy dia toerana manan-danja toy ny westminster abbey, ny Teatra Globe an'i Shakespeare na ny kensington palace. Tafiditra ao anatin’izany koa ny fandehanana sambo amin’ny Thames. Na izany aza, ny tombony amin'ity karatra ity dia miankina amin'ny isan'ny toerana mahaliana tianao hotsidihina.
Ho famaranana, manantena izahay fa ho namaly ny fanontaniana inona no ilaiko handehanana any london. Ny anay ihany no milaza aminareo fa raisinareo ihany koa ny klimatolojia rehefa manangona ny valizy ianao. Na dia malaza amin'ny orana aza ny tanàna, dia tsy dia be loatra izany. Ary malefaka ny mari-pana mandritra ny taona. Amin'ny fahavaratra dia mahalana izy ireo no mihoatra ny telopolo degre, raha amin'ny ririnina dia sarotra ho azy ireo ny midina ambanin'ny zero. Ankehitriny dia mila mandamina ny dianao mankany London ianao. Tsy hanenenana ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Londres » Inona no ilaiko handehanana any Londres